Sida loo sii qulquli Video ka Mac in iPad
> Resource > iPad > Stream Video ka Mac in iPad Si fudud iyo si xor ah
IPad waa qalab la qaadi karo si uu u daawado filimada iyo bandhigyada TV. Si kastaba ha ahaatee, Lugood kaliya kuu ogolaanaysaa inaad ka Mac idman in ay iPad qulquli saaxiibtinimo iPad videos. Haddii videos ee aad ku helay ma aha iPad taageeray qaabab ama ay ku jiraan Mac kala duwan oo aad u isticmaali marnaba si hagaagsan oo iPad, dhibaatooyinka soo.
Ha welwelin. Halkan yimaado xal fiican aad u. Waxaad ku samayn kartaa adigoo isticmaalaya ah Mac in iPad kala iibsiga qalab loo isticmaali karo si fudud - Wondershare TunesGo (Mac) . Qalabkani waxa uu ku siinayaa fursad ay ku sii qulquli video ka Mac in iPad la eber khasaaro xogta aad. Xitaa video la badbaadiyey on duwan Mac, qalab kaa caawinaysaa in aad wareejiso aad iPad.
Tallaabooyinka Easy ku saabsan sida loo sii qulquli video ka Mac in iPad
Hoos waxaa ku qoran tilmaan buuxda oo ku saabsan sida loo sii qulquli video ka Mac si aad iPad. Waxaa Fiiri.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare TunesGo (Mac)
Download iyo rakibi Wondershare TunesGo (Mac) on your Mac socda Mac OS X 10.8, 10.7, iyo 10.6. Oo waxaa si buuxda u taageersan oo dhan lagu daydo iPad socda ee macruufka 5 / macruufka 6 / macruufka 7. Markaas, bandhigista Wondershare TunesGo (Mac)
Sida user Windows ah, waxaad u tagi kartaa si Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows) si ay u gudbiyaan videos ka computer Windows in iPad .
Tallaabada 2. Isku aad iPad si Mac
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad si Mac. Qalabkani waxa uu ogaan doonaa iPad si degdeg ah oo ay u muujiyaan xogta ay suuqa kala bilaabo.
Tallaabada 3. Stream video in iPad ka Mac
In galeeysid bidix, guji Movies ama TV muujinaysaa dhanka bidix. Daaqadda maamulka, guji "Add" xitaa aad Mac ilaa heli videos aad rabto in aad sii qulquli in iPad. Dooro iyaga oo guji "Open". Markaasay aad arki doonaa videos kuwan waxaa huleeshay in aad iPad.
Haddii videos aad hoorto in aad iPad ma taageersana by iPad, Wondershare TunesGo (Mac) badalo doonaa videos si aad kuwa qaab .m4v.
Ka dib markii hoorto videos ka Mac in iPad, waxaad iyaga arki doonaa on your iPad. Tani waa sida aad u sii qulquli videos ka iMac in iPad aan Lugood. Iyadoo qalab, doonaa mar dambe ma aad walwalo video incompatibility la iPad iyo files tirtiro arrimaha on your iPad.
Isku day TunesGo inay sii qulquli filimada ka iMac in iPad!
3 Hababka si ay u gudbiyaan Photos ka iPad in iMac
Sida ugu wanaagsan ee ay u soo kabtaan tirtiray Notes on iPad 2/3
Sida loo Undelete Video ku iPad
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Biyaha Burburay iPad